SANN MAW: ဖူကူရှီးမားကြောင့် ဂျပန်အစိုးရ တရုတ်ရဲ့ နှပ်ပစ်ခံရခြင်း
ဖြစ်တာက ခု တရုတ်မှာလဲ သွေးပျက်ပီး အိုင်အုိုဒင်းဆားတွေ..ပြတ်လပ်ကုန်တဲ့အထိ ဝယ်ကုန်ကြပီဆုိုပဲ၊ ဒါကို တရုတ်အစိုးရက လူတွေက မလုိုသေးပါဘူး မဝယ်ကြပါနဲ့ဦး၊ ဒါဟာတရုတ်ပြည်နဲ့အဝေးကြီးပါ.လေကလဲ တခြားဘက်ကိုတုိုက်နေပါတယ်။ တကယ်ရောက်လာခဲ့သည်ရှိတောင်အန္တရာယ်မရှိနုိုင်ပါဘူး ဘာညာ တားတယ်ပေါ့ဗျာ။ တားလဲ တားတားပဲ ဝယ်တဲ့ လူတွေကလဲ ဂရုမစို်က်ဘူး။ ကုိုယ့်ရှိမှ ကိုယ်စားရတာ ၊သူများအားကိုးလုို့မရဘူးလို့ ဘဝပေးအသိနဲ့တွေးကြပုံရတယ်။
ကြည့်ရတာ သူတုို့လဲ သူတုို့အစိုးရကို မယုံဘူးနေမှာပေ့ါ။ ကိုယ်တုို့ဆီကလူတွေကြနေတာပဲ။ဒါနဲ့ အုိုင်အုိုဒင်းဆားတွေ အလုအယက်ဝယ်ကြလေသတည်းပေ့ါဗျာ။ တရုတ်အစုိုးရကလဲ..ဒါသူတုိုင်းပြည်က လူတွေ သူ့မယုံတာ သူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်ကောင် အစုိုးရ သတင်းထိမ်ချန်တယ်ပေ့ါ။ ခင်ဗျားတုို့ဒီလုို လုပ်လုို့ ကျုပ်လူတွေတောင် ကျုပ်ကိုမယုံဘူးတွေ၊ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
ကြေညာချက်ထုတ်တယ် ဂျပန်အစုိုးရ ပွင့်လင်းသင့်ပါတယ်။ ဘာညာပေ့ါ။ မုိုက်လားဗျ ကြေညာချက်က။
တရုတ်မှာ လဲ ဝယ်တာ အတော်ဆုိုး ဆုိုပဲဗျ။ စူပါမားကတ်တခုဆုို အရင်ဆားထားတဲ့နေရာက အကုန်ရောင်းကုန်လုို့ စင်ရဲ့ အဆင့် ၅ ဆင့် လုံး ဆန်အိတ်တွေနဲ့ ဖြည့်လုိုက်ရတယ်တဲ့။ ဟော နောက်တဆုိုင်ကြတော့ လာဝယ်တဲ့ လူတွေဆီက ပိုက်ဆံကြိုပီး စဘော်တောင်းထားသတဲ့ ၊ဒီနေ့တော့ ကုန်နေပီ။ ရတဲ့အချိန်ကြရင်ချန်ထားမယ်ပေ့ါ။ ကျုပ်တုို့ပြည်မှာဆုိုရင်တော့ ဘာတဲ့လေပါတ်ကားခေါ်မလား ။ ပစည်းက မရှိသေးဘူး လေနဲ့ ရောင်းထားလို်က်ပီ။ တရုတ်မှာ ဆုိုတော့ တရုတ်လေပါတ်ကားပေ့ါ။ တော်တော်များများက ဘယ်ကနေအိုင်အုိုဒင်းဆား အကြောင်းကို သိလဲ ဆုိုတော့ QQ ချက်ကနေသိတာတဲ့ ၊ အဲ့ဒီ chat က တရုတ်မျာ တော်တော် ခေတ်စားတယ်ဆုိုပါ့လား။
နောက်တရုတ်အဖွားကြီး တယောက်ကတော့ သူ့သမီး ကျောင်းဆရာမကို ကုန်တုိုက်သွားပီး ဆားဝယ်ခုိုင်းတာ၊ ဟုိုကျောင်းဆရာမ တဆုိုင်လဲမရ၊ နောက်တဆုိုင်လဲ မရ နဲံ သုံးလေးဆုိုင် လောက်ရှာပီးတော့ သူလဲစိတ်မရှည်တာပြန်လာပီး။ သူအမေကို မရဘူးပေ့ါ။ ခုမရလဲအရေးမကြီးသေးပါဘူး။ ဂျပန်နဲ့ကလဲ အဝေးကြီးပါ ဘာညာသူ့အမေ သက်သာအောင်ပြောတာ နေမှာပေ့ါဗျာ။ အဲ့ဒါကုို အဖွားကြီးက မရခဲံ့လုိုဆုို ခီးနေတာကနေ။ သူ့သမီးပြောတာကြားတော့။ ငါ့ကို လက်ချာ လာရုိုက်မနေနဲ့လုို့ပြန်ပြောလုိုက်သတဲ့။
အင်းကြားတာတော့ တရုတ်တင်မဟုတ်ဘူး။ ကိုရီးယားမှာ လဲ ဒီလုိုပဲ တဲ့ ဆားပြတ်လတ်နေပီးပြောတယ်။ လူတွေလဲသွေးပျက် လာရင်မလွယ်ဘူးနော်... လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြတာပဲ။
ဒါနဲ့ သတင်းကောင်းတခုကတော့ ခုညပုိုင်း NHK ကနေ မုိုးလေဝသ သတင်းကြေညာတာ နားထောင်လုိုက်ရတယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာ ။ လေက အနောက်ဘက်ကနေ. အရှေဘက်ကိုတုိုက်မယ်တဲ့ အနည်း ဆုံး ၃ရက်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်။ ဆုိုလုိုချင်တာက ဒါဆုိုရင် ၃ရက်စာတော့ စိတ်ချသွားရပီပေ့ါ။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစည်းတွေက ပင်လယ်ထဲကိုပါသွားတော့မှာ ဆုိုတော့ ။ ဒါပေမယ့် ဒီချိန်ဆုို အမေရိကားက လူတွေ.သွေးပျက်ကလှည့်လားမသိဘူး။ ဘာလုို့ဆုို အဲ့ဖက်မှာ ပင်လယ် ကျော်ပီးရင် အမေရိကားရောက်တာကိုးဗျ။
နောက် ကျူးပစ် မှာ လဲ ကောလ ဟလ တင်ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဘာတဲ့ ခု မြန်မာ ပြည်မှာကျတော့ ရိုးရိုးဆားတွေ ဈေးတက်နေပီတဲ့ ။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့ ဂျပန်က ညူကလီးယားတွေ ပင်လယ်ထဲစိမ့်ဝင်လာရင် နောက်ထုတ်မဲ့ ဆားတွေမှာ ရေဒီယိုဓါတ်တွေပါလားမှာ ဆုိုတော့ ခုကင်းကင်းရှင်းရှင်းဟာ ကို ဝယ်ထားမှ ဖြစ်မယ်ဆုိုလားပဲ။ ဟုး လွယ်ဘူးဗျ..လွယ်ဘူး..ပြောတော့ မရဘူးဗျ. အသိဥာဏ်မရှိရင် သူများပြောသမျှဟုတ်နုိုးနုိုးဆုိုတာကိုး။ မြန်မာပြည်မှာ ကလဲ မျက်စိပိတ် နားပိတ်ဆုိုတော့ ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်နေမှာပဲ။ ဂျပန်အစိုးရ ကံကောင်းသွားတာက၊ သူကရိုးရိုးဆားဆုိုတော့ အလွယ်နဲ့ကုန်စရာအကြောင်းမရှိတော့ ကိုယ်တုို့အစိုးရက ဂျပန်အစုိုးရ ကို အပြစ်တင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ နုို့မဟုတ်ရင် သူလဲ ဂျပန်အစိုးရ ပွင့်လင်းသင့်ပါတယ် လုပ်နေဦးမယ်။
ဘယ်သူကံကောင်းတာလဲတော့ မသိဘူး။ တချို့လူတွေ ကံဆုိုးပေမယ့် တချို့ကြတော့သိပ်ကံကောင်းတယ်ဆုိုတဲ့ ချစ်ကောင်းသီချင်းပဲ ဆုိုနေရတော့မယ်ထင်တယ်။ ပိတ်သတ်ကြီးတုို့ရော ဘယ်လုိုထင်လဲ ဗျ။
ကဲဘာပဲပြော ကိုယ်ကတော့ အားလုံးကံကောင်းစေချင်ပါတယ်။
I guess I should makeamove to buy iodine salt tomorrow. You never know, we live in DR in Carribean. We felt an earthquake the day before yesterday it was 5.4 scared to death but it was okay. Thanks for the interesting postings. Please keep writing.
shin 18 March 2011 at 13:29
အမှန်တော့ တရုတ်ပြည်သူတွေက ဂျပန်အစိုးရထက်သူတို့အစိုးရကိုပိုပြီးမယုံတာ ထင်ပါတယ်။ တခုခုဖြစ်လာရင် အစိုးရကိုထိုင်စောင့်နေတာထက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာကောင်း၏ဆိုပြီး ဆားတွေကြိုဝယ်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဂျပန်အစိုးရအတွက်တော့ တရုတ်အစိုးရအဲလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက် သူ့မှာဘာထိခိုက်မှုမှမဖြစ်သွားပါဘူး။ အခုလက်ရှိသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးတာက သူ့တိုင်းပြည်ကပြသနာတွေအရင်ဖြေရှင်းဖို့ပဲ။ သူ့ကိုဂျပန်ပြည်သူတွေက ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ကသူ့အတွက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
For your references, see what Malaysian PM's wife say on japan disaster,
crystal 18 March 2011 at 15:02
တကယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း နားလည်ပါတယ်၊ ပြည်သူတွေကိုလည်း စာနာမိပါရဲ့။ ဆုတောင်းပေးရုံပဲ တတ်နိုင်တော့ သစ္စာဆို မေတ္တာပို့ရုံပဲရှိတာပေါ့။
khin oo may 19 March 2011 at 05:53